I-Semalt: I-Legend Virus Okuthathwa Ukuba Yenze Okuhle
UJason Adler, Semalt uMenenja weNtuthuko yeMakhasimende, uthe: "Nganginethuba lokubuka ifilimu" NgingumLume "ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi ngangihlaba umxhwele ngokuthatha ama-Zombies. i-movie, uhulumeni wase-United States uqala igciwane elihle elivimbela zonke amagciwane eziyingozi kubantu. Uma leli gciwane lijova emzimbeni womuntu, akaguli, futhi akumele kube khona injection ukuze kuqinisekiswe impilo yakhe. babheka iminyaka emihle kuze kube yilapho abantu bekhalaza ngemiphumela emibi yalesi sifo. Bathi igciwane elihle laqala ukubhubhisa izitho zomzimba zabo bese libenza bahambe befile.
Indaba yale filimu yanikezwa kahle nguWill Smith, owadlala indima ehola phambili. Wasebenza njengososayensi, ekhonza ebhukwini likahulumeni. Wayesebenza emisebenzini ehlukahlukene futhi wazama ukuthola isisombululo senkinga eyayikhipha umonakalo eNew York City. Umlingisi oyinhloko wanikezwa ngebhulethi ehlukile lapho uWill Smith enza khona ukuhlolwa kwakhe egazini. Nakuba ukuphela kwefilimu kwakungalungile, kwangenza ngicabanga ukuthi inqubo efanayo ingasetshenziswa kuma-computer nakumadivayisi eselula.
Ake sicabange ukuthi abantu abathintekayo bangama-computer. Igciwane elihle lingena ezinkampanini zekhompyutha futhi libhubhisa inani elikhulu lamafayela..Lokhu kuthinta ngisho amaseva ngaphandle kolwazi lwakho nokuvikelwa kwedatha okungenakwenzeka. Ngisho namasu amathiphu okuvikeleka yakamuva awusizo ngalutho futhi awuqinisekisi imiphumela yemiphumela.
Abantu abahlukahlukene bangitshele ukuthi ukutheleleka kwakudingeka kuthathwe ngokushesha, kodwa kunzima ukukwenza. Uma umuntu oyedwa enezinhlobo ezingaphezu kwezinkulungwane ezintathu ze-virus kanye nezingxenye eziyikhulu ze-spyware esebenza kukhompyutheni yakhe, akanakuziqeda ngohlelo olulodwa lwe-antivirus. Ngisho namathuluzi ahamba phambili, afaka phakathi i-Malwarebytes, angase akwazi ukubhekana nale nkinga. Ngeshwa, amagciwane wamanje abe namandla futhi anamandla kunanini ngaphambili. Ngisebenzisa ama-Malwarebytes ngokudala izindlela ze-AV yokufaka. Angiqondi ukuthi kungani ugijima ikhomputha yakho ngaphandle kokwazi izinhlelo ze-antivirus. Kunezinhlelo ezithile ezinhle nezinye ezimbi. I-AVG Free, isibonelo, ayikho lutho futhi isebenza kahle. Kodwa ngenxa yezizathu ezithile, izazi aziphakamisi le software, futhi ayikwazi ukukhuthaza izibungu zegciwane emhlabeni jikelele.
Ngakho, iphrojekthi yami eyimfihlakalo ingase inikeze imiphumela efunayo uma igcwalisiwe. Iphrojekthi yami engashiwo igama izoziphindaphinda izigciwane ezithinta amadivayisi wekhompyutha ngaphandle kolwazi lwakho. Kanye efakwe, izovikela amafayela wokubhalisa, izinkomba zempande, kanye nenkumbulo futhi izovimbela ukuqala kwazo zonke izinhlobo zegciwane. Kuzovimbela nokuhlaselwa kokuhlaselwa, ukuhlaselwa kobugebengu obuyingozi, kodwa umehluko kuphela phakathi kohlelo lwami nezinye izinhlelo ukuthi uyifaka kanjani ngokushesha. Ukuziphindaphinda nge-imeyili, amasayithi omphakathi wezokuxhumana kanye nokuthumela imibiko esheshayo kungenzeka. Kufanele uqhubeke ulwa namagciwane futhi uvikele idivayisi yakho yekhompyutha ezintweni eziyingozi. Ngenxa yalokhu, kufanele ufake uhlelo futhi uthumele umlayezo ohlelweni. Ngenxa yezinkinga ezithile zomthetho, ngihlele ukumisa okwesikhashana le phrojekthi, kodwa ngithemba ukuyiqala esikhathini esizayo lapho izinkinga zixazululwa Source .